Shuruudihii u danbeeyey ee Guddomiye Jawaari mooshinka ka hor iyo loolanka saacadaha danbe - Caasimada Online
Home Warar Shuruudihii u danbeeyey ee Guddomiye Jawaari mooshinka ka hor iyo loolanka saacadaha...
Shuruudihii u danbeeyey ee Guddomiye Jawaari mooshinka ka hor iyo loolanka saacadaha danbe
Muqdisho (Caasimadda Online) – Wada hadalladii ku saabsanaa xal u helista khilaafka Baarlamaanka ayaa gabi ahaanba la joojiyey, kaddib markii guddiyada ku howlanaa arrinkan ay xalay u gudbiyeen Madaxweyne Farmaajo natiijo muujineysay kala fogaanshaha labada dhinac.
Ilo xogogaal ah ayaa Caasimadda.net u xaqiijiyey in kulan xasaasi ah ay yeesheen xalay Madaxweynaha iyo Guddoomiye Jawaari kaddib kulankii ka horreyey kaas ee guddiyada dhex dhexaadintu ay u gudbiyeen Madaxweynaha natiijadii waan waanta ay wadeen tan iyo bartamihii bishii sadexaad.
Wararka ayaa sheegaya in xaaladdu ay adkaatay kaddib markii uu Guddoomiye Jawaari si cad uga hor yimid in mooshinka laga keenay la mariyo hannaanka dastuuriga ah oo ay xildhibannadu cod geliyaan.
Jawaari ayaa codsaday in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay siiso magdhow gaaraya 5$ Malyan oo doolar, si uu isu casilo. Taas oo uu sheegay in ay tahay wadada kaliya ee uu xilka ku banyan karo.
Isfahan waagan iyo shuruudaha adage ee Guddoomiye Jawaari uu hor dhigay madaxda Kale ayaa gaartay heer uu Jawaari ku hanjabo in uu qorsheynayo in awood ciidan uu isticmaalayo isaga oo adeegsanaya Guutada 4aad ee ciidanka Xoogga Dalka oo uu sheegay in ay garab ku siinayaan dhaq dhaqaaq kasta oo uu kaga hortagyo ansixinta mooshinka laga keenay.
Lama oga xaaladdu sida ay noqon doonto maalinnimada Barri oo ah maalinta uu iclaamiyey Guddoomiye Kuxigeenka 1aad ee Golaha Shacabka in uu dhici doono kulanka Xildhibaannada Baarlamaanku ay kaga arrinsanayaan mooshinka ay ka keeneen Guddoomiye Jawaari.